Qaphela Ukulayisha Izikripthi ZeGoogle Analytics Eziningi | Martech Zone
Qaphela Ukulayisha Izikripthi Ze-Google Analytics Eziningi
Ngokuhlanganiswa okuningi kwamathuluzi ezinhlelweni eziningi zokuphathwa kokuqukethwe, sibona amaklayenti ethu amaningi enezinkinga ngemibhalo yeGoogle Analytics efakwa ekhasini kaningi. Lokhu kudala umonakalo ku analytics, okuholele ekubikeni okukhulu ngokweqile kwezivakashi, amakhasi ngokuvakasha ngakunye futhi kungabi nesilinganiso sokuncipha
Namuhla nje besineklayenti ebelinama-plugins ama-2 alayishiwe futhi alungiselelwe ukwengeza iskripthi seGoogle Analytics kubhulogi labo. Futhi ayikho i-plugin ehlolile ukubona ukuthi ngabe besivele silayishiwe yini iskripthi! Umphumela waba ukuthi ukuvakashelwa kwabikwa ngokweqile futhi izinga labo lokuncipha lalicishe libe ngu-3%. Uma isilinganiso sakho sokuncipha sehlela ngaphansi kuka-5%, qiniseka ukuthi unenkinga ngezikripthi eziningi ekhasini lakho.
Ngaphandle kwezibalo, ungabona kanjani ukuthi ukwenzile lokhu? Enye indlela ukumane ubuke umthombo wekhasi lakho bese ulifuna js. Noma ufuna ukuqapha isayithi nge ama-akhawunti amaningi we-Google Analytics, kufanele kube neskripthi esisodwa kuphela.
Enye indlela ukuvula amathuluzi wonjiniyela kusiphequluli sakho bese ubheka ukuxhumana kwenethiwekhi ngemuva kokuvuselela ikhasi. Uyabona ukuthi iskripthi se-ga.js sicelwa kaningi?
I-Google Analytics isebenza ngokulayisha iskripthi esihlanganisa lonke ulwazi, sigcine imininingwane kuma-cookies esiphequluli bese siyithumela kumaseva weGoogle ngesicelo sesithombe. Lapho iskripthi silayishwa ngaphezu kokukodwa, kwesinye isikhathi sibhala ngaphezulu amakhukhi, bese sithumela izicelo eziningi zesithombe kuseva. Kungakho ifayili le- izinga lokunciphisa liphansi kakhulu… uma uvakashela amakhasi angaphezu kwelilodwa kusayithi, awugadli. Ngakho-ke… uma imibhalo idubula ngaphezu kwesisodwa lapho uvakashela ikhasi elilodwa, kusho ukuthi uvakashele amakhasi amaningi.
Bheka ikhasi lakho ne analytics ukuqiniseka ukuthi i- analytics script ifakwe kahle kusayithi lakho, futhi uqiniseke ukuthi awulayishi ngephutha iskripthi kaningi. Uma wenza kanjalo, idatha yakho ayinembile.
Tags: izinga lokunciphisagajsI-google analytics
Okthoba 3, 2012 ngo-3: 32 AM
Ngiyabonga, ngizokubheka lokhu. Ngicabanga ukuthi lesi yisona sizathu esenza ukuthi isiza sami se-ecommerce singabi nethrafikhi yangempela embikweni wayo we-analytics. iskripthi se-google sihlukile kunekhodi yokulandelela ekhona embikweni wayo we-google analytics. ngiyabonga mlingani.
Nov 14, 2013 ngo-6: 21 AM
Sawubona Douglas, ukuqonda okukhulu. Ngibe nokwehla okufanayo kusukela ngiqale izivivinyo ezithile kwi-Google Tag Manager emasontweni ambalwa edlule: Ikhasi elingu-4 / Ukuvakasha 🙂 nokubuyela emuva okwamanje ku-0.47% 😀
Ukulandela okuthunyelwe kwakho, nansi imiphumela yami:
1.Imibhalo: Kukhona i-1 ga.js (nginamathisele kuphela ikhodi ye-Analytics ne-Tag Manager kusayithi lami). Angiboni kuskripthi sesibili (Umphathi Wethegi) noma iyiphi ireferensi ku-ga.js kepha i-gtm.js kuphela. Anginayo ikhodi enkulu nje kuphela lezo ezi-2 ezinamathiselwe ndawonye (i-analytic yokuqala, bese kuba yi-TM), ngakho-ke angidingi ngisho nokusebenzisa uhlelo lokusebenza, kepha ngiphinde ngabheka ne-firebug.
2. Kwi-Tag manager Console ngidale umcimbi owodwa (isikhathi esifanayo sokwakha, isikhathi esifanayo sokuqala i-br br). Lo mcimbi ngokuyisisekelo usebenza njengomlaleli wokuchofoza isixhumanisi se-Outbound Links futhi uyafana nalowo owelulekwe nguJames Cutroni kubhulogi yakhe. Kepha ngenze ukuguqulwa okuncane: Eyodwa i-Non-Interaction Hit isethwe ku-True (okungafanele ishintshwe isilinganiso se-bounce?) Kepha ngibe sengengeza i-Label = referrer esikhundleni sokuyishiya ingenalutho, ngoba bengifuna ukwazi lapho ukuchofozwa uvelaphi. (Noma kunjalo ngiyisusile namuhla njengoba ayisebenzi kangako njengoba bengicabanga)
3. Ngisenezixhumanisi ezimbalwa eziphumayo ne-onClick yakudala = ”_ gaq.push ()” ishumekiwe kepha zonke zisethelwe ekuchofozeni okungasebenzelani ku-True.